Daryeelida Badbaadintaada, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Maxay dadka iyo Masiixiyiintu isu aaminsan yihiin inay tahay wax aan macquul aheyn inay rumeystaan ​​nimco shuruud la’aan ah? Muuqaalka guud ee maanta laga dhex arko Masiixiyiinta maanta waa badbaadada ugu dambeyntii waxay kuxirantahay waxaad sameysay ama aadan sameynin. Ilaah waa sarreeyaa, oo lama xoojin karo; ilaa hadda ma qabsan kartid. Aad u qoto dheer oo ma hoos geli kartid. Ma xasuusan kartaa heestan injiilka caadiga ah?
Ilmaha yari waxay jecelyihiin inay ku heesaan heeskan maxaa yeelay waxay ereyada la raacikaraan dhaqdhaqaaqyo munaasib ah. "Aad buu u sarreeyaa" ... oo gacmahooda kor u qaada madaxyadooda; "Ilaa iyo hadda" ... oo gacmahooda ballaaran ku kala faafi: "aad u qoto dheer" ... oo hoos u foorari intii karaankooda ah. Waa wax lagu farxo in loo heesto gabaygan quruxda badan waxayna carruurta bari kartaa xaqiiqo muhiim ah oo ku saabsan dabeecadda Ilaah. Laakiin markii aan sii gabowno, immisa ayaa rumeysan taas? Dhawr sano ka hor, Dhacdooyinka Soo Baxa - oo ah joornaal Xarunta Cilmi-baarista Diinta ee Princeton - ayaa soo sheegay in boqolkiiba 56 dadka Mareykanka ah, oo intooda badan isku tilmaamay inay yihiin Masiixiyiin, ay yiraahdeen markii ay ka fekeraan dhimashadooda, waxay aad iyo aad uga welwelsan yihiin arrintaas, "la'aanteed Dambi dhaaf Eebbe ».
Warbixinta, oo ku saleysan daraasad ay sameysay Machadka Gallup, waxay ku dartay: “Natiijooyinka noocan oo kale ah waxay kor u qaadaan su'aasha ah in Masiixiyiinta Mareykanka ay fahmayaan macnaha masiixiga ee“ nimcada ”waxayna soo jeedineysaa in la xoojiyo barista kitaabiga ah kuwa Masiixiyiinta ah. Si loo baro kaniisadaha. Maxay dadka iyo Masiixiyiintu isu aaminsan yihiin inay tahay wax aan macquul aheyn inay rumeystaan ​​nimco shuruud la’aan ah? Aasaaska Baddalaadda Protestantku waxay ahayd barista kitaabiga ah in badbaadada - cafiska dhammaystiran ee dembiyada iyo dib-u-heshiisiinta lala yeesho Ilaah - lagu gaadhay oo keliya nimcada Ilaah.
Si kastaba ha noqotee, aragtida ku dhex jirta Masiixiyiinta wali waa badbaadada ugu dambeyntii waxay kuxirantahay waxaad qabatay ama aadan sameynin. Mid ayaa qiyaasaya dheelitirka rabbaaniga ah ee weyn: camalka wanaagsan ee hal maddiibadda iyo camalka xunba midka kale. Boorashka ugu miisaanka weyn ayaa muhiim u ah badbaadada. La yaab ma leh inaan baqno! Miyey noqon doontaa maxkamada in dembiyadeenna ay "duugeen" oo aan xitaa aabihii korin karin, "kuwo badan" in dhiiga Ciise uusan dabooli karin, iyo inaan "aad u qoto dheer" in Ruuxa Quduuska ahi mar dambe na ma soo gaari karaa? Runtu waxay tahay, ma aha inaan ka walwalayno inuu Ilaahay inaga cafiyo; wuxuu horay u qabtay: “Masiixu wuxuu inoo dhintay innagoo weli dembilayaal ah,” Baybalku wuxuu inoogu sheegayaa Rooma 5,8.
Waxaan xaq ku nahay oo keliya maxaa yeelay Ciise wuu dhintay oo mar kale ayuu na sara kacay. Kuma xirna tayada adeecidayada. Xitaa kuma xirna tayada iimaankeenna. Waxa muhiimka ahi waa iimaanka Ciise. Waxa kaliya oo aan sameyno waa inaan aaminno isaga oo aqbalna hadiyaddiisa wanaagsan. Ciise wuxuu yiri: «Wax walboo aabbahay i siiyo way ii yimaadaan; oo ku alla kii ii yimaadaa aniga riixi maayo. Maxaa yeelay, waxaan uga imid xagga jannada inaan sameeyo doonisteyda, laakiin doonista kuwa ii soo diray. Laakiin waa doonistii kii i soo diray inaanan lumin wax kasta oo uu isagu i siiyey, laakiinse inaan maalinta u dambaysa sara kiciyo. Waayo, tanu waa doonistii aabbahay, in ku alla kii arka oo rumaystaa wiilka lahaadaa nolosha weligeed ah; waana sara kicin doonaa maalinta u dambaysa » (Joh. 6,37-40,). Taasi waa rabitaanka Ilaahay ee adiga. Ma aha inaad baqdo. Ma aha inaad walwasho. Waad aqbali kartaa hadiyadda Eebbe.
Qeexid ahaan, nimcadu waa istaahila. Maaha lacag bixin. Waa hadiyadda Ilaahay ee jacaylka bilaashka ah. Qof kasta oo raba inuu aqbalo wuu helayaa. Waa inaan ku aragnaa Ilaah qaab cusub oo wax loo arko, sida Kitaabka Quduuska ahi dhab ahaan u muujiyey isaga. Ilaah waa Bixiyahayaga, ma ahan dambiyadeena. Isagu waa Badbaadiyahayaga, ma tirtirayo. Isagu waa saaxiibkeen, ma ahan cadowgeenna. Ilaah baa na saaran.
Taasi waa farriinta Kitaabka Quduuska ah. Waa farriinta nimcada Eebbe. Garsooruhu wuxuu horey u qabtay wax kasta oo loo baahan yahay si loo hubiyo badbaadadeenna. Taasi waa warka wanaagsan ee Ciise inoo keenay. Qaybo ka mid ah heesihii hore ee injiilka ayaa ku dhammaanaya heesaha, "Waa inaad ka soo gashaa albaabka". Albaabku maahan meel qarsoon oo ay dad badani ka heli karaan. Matayos 7,7: 8, Ciise wuxuu ina weydiiyay: «Weydiiso, waa lagu siin doonaa; doona oo waad heli doontaan; garaaca, marka waa lagu furi doonaa. Waayo, ku alla kii wax weyddiista halkaasuu aqbalaa. oo ku alla kii wax baadha, halkaas ka helo; oo kii garaacana waa laga furi doonaa.